Vaovao - Ny firoboroboan'ny vokatra pulp moulding ao amin'ny orinasanay
Fonosana vokatra elektronika
vilany pulp finday
Loza fitahirizana kapila mafy finday
vilany pulp ho an'ny penina condenser
Fitaovana taratasy fampiasa amin'ny solosaina
valizy vokatra elektronika hafa
Fonosana vokatra ho an'ny mpanjifa
Fitaovana latabatra azo ampiasaina
Tavoahangy vita amin'ny tavoahangy labiera
Fonosana pulp ho an'ny zavatra ilaina isan'andro
Boaty fanomezana kosmetika na lovia pulp
vilany pulp ho an'ny aloky ny maso
Ny firoboroboan'ny vokatra pulp moulding ao amin'ny orinasanay
Ny orinasanay dia nitombo tao amin'ny indostrian'ny vokatra famolavola pulp nandritra ny 6 taona, nandritra izay nandrosoana lehibe. Manokana, vokatra azo amina tontolo iainana sy latabatra azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana no be mpampiasa, fa mbola betsaka ny fetrany amin'ny fampandrosoana ny vokatra vita amin'ny pulp vita amin'ny orinasanay.
(1) Na dia efa nivoatra nandritra ny taona maro aza ny vokatra famolavolana pulp, ny tahan'ny fampiasana tsena dia tsy avo, iray amin'ireo antony lehibe dia lafo loatra ny vidin'ny lasitra, ny mpamokatra sasany amin'ny famolavolana ny bobongolo dia handinika ny fomba hanaovana manana fahaiza-manao tsara izy io, hampiakarana ny tahan'ny fampiasana ny bobongolo, hampihenana ny vidiny. Ohatra, ny liner cored ampiasaina matetika, Angle guard, baffle, sns., Satria ny isan'ny famokarana, batch betsaka, izay miteraka fampiasa betsaka amin'ireo lasitra ireo, dia mampihena be ny vidiny, izay tsy dia heverin'ny mpanamboatra sinoa. Noho izany, ny famolavolana sy ny fanomanana ny bobongolo dia làlana fampandrosoana lehibe. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia mikasa ny hametraka tsikelikely amin'ny famolavolana sy famokarana bobongolo. Antenaina amin'ny taona vitsivitsy ho avy hahatratra ny famokarana lasitra manokana.
(2) Fikarohana tsy ampy amin'ny fikarakarana slurry, dia hitarika amin'ny famokarana vokatra plastika pulp tsy afaka hihaona toetra ara-batana manokana, noho izany dia tsy afaka mamaly ny tena filàna. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ny orinasa dia mampiasa mivantana ny pulp voalohany toy ny pulp hazo, pulp volotsara, pulp fary, miteraka vidiny lafo. Noho izany, ny orinasanay dia hanamafy ny fikarohana sy ny fampiroboroboana ny akora vita amin'ny pulp, ary amin'ny lafiny iray, hampitombo ny fanodinana sy ny fampiasana boaty taratasy fako, taratasy fako ary kofehy faharoa hafa, mba hahatratrarana ny tena fiarovana ny tontolo iainana. .
(3) Noho ny firafitry ny vokatra pulp vita amin'ny bobongolo ampiasaina amin'ny vokatra indostrialy, dia tsy misy fitsaboana aorinan'ny laoniny, ka miteraka fandokoana tsy mitovy, mora manjavona, very volo, endrika tokana ary trangan-javatra hafa ao amin'ny ozinina vokatra vita amin'ny pulp vita amin'ny indostrialy vokatra, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fampiharana azy. Antenaina fa azo hatsaraina ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo dingana manaraka fitsaboana mahomby amin'ny ho avy, mba hahafahan'ny fampiharana azy hivelatra kokoa.
(4) Amin'izao fotoana izao, ny vokatra famolavolana pulp dia sarotra ampiasaina ho toy ny ondana ho an'ny vokatra lehibe habe, toy ny vata fampangatsiahana, fitaovana amin'ny rivotra ary kojakoja mavesatra ao an-trano. Ahoana ny fanatsarana ny tanjaky ny mekanika amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny habeny, ny fanatsarana ny fitaovana, ny famolavolana bobongolo ary ny fitambarana fitaovana fiarovana ny tontolo iainana mba hahafeno ny filan'ny vokatra habe lehibe, izay torolàlana lehibe koa amin'ny fampivoarana ireo fitaovana fonosana taratasy-plastika.
Fotoana fandefasana: Nov-04-2020
Fako Pulp voaoloko, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana, Box Mf kosmetika, Boaty fonosana sakafo, Pulp Cup Holder, Fonosana sakafo boaty baoritra,